Fetin'ny Sunny any Barbados | Vaovao momba ny dia
Mariela Carril | | Barbados, mpitarika
Raha mandray planisphere ianao dia ho hitanao fa any amin'ny faritry ny Ranomasina Karaiba dia misy vondronosy nosy tropikaly marobe. Be dia be izy ireo! Misy Barbados, nosy misy masoandro be, morontsiraka tsara tarehy, kolontsaina tena manankarena ary fotodrafitrasa lehibe atokana ho an'ny fizahan-tany.
Mety tsy izany no tanjona voalohany tonga ao an-tsainao rehefa mieritreritra an'i Karaiba ianao, fa raha mitady zavatra hafa ianao, toerana iray izay tsy miteny espaniola sy misotro ronono be dia be, ohatra, Barbados dia miditra ao amin'ny Top 5. Ka, andao jerena inona no miandry antsika any Barbados.
2 Recommended Beach any Barbados
3 Hetsika fizahan-tany hafa any Barbados
Ao amin'ny Antilles Kely, akaikin'ny Grenadines sy Saint Lucia. Na dia nanitsaka izany aza i Columbus tamin'ny diany voalohany dia vetivety dia lasa a UK domain ary na dia nahazo ny fahaleovantenany aza izy tamin'ny taona 60, dia mbola mifandray aminy ihany io amin'ny alàlan'ny Commonwealth.
Ny renivohiny dia ny tanànan'i Bridgetown. Zara raha nisy ny nosy 34 kilometatra ny halavany ary 23 ny sakany. Nosy ambany izy io ary zara raha mihoatra ny 300 metatra ny haavony. Mahafinaritra be ilay izy toetrandro tropikaly na dia mandeha eo anelanelan'ny volana jona sy oktobra aza ianao dia ho orana be. Raha ny marina dia ampahany amin'ilay faritra notafihan'ny rivo-doza sy tafiotra matanjaka amin'izany ora izany, na dia tsy izany aza ny fahasahiranan'ny nosy Karaiba hafa.
Barbados dia nanohy namokatra siramamy, saingy nandritra ny fotoana ela dia nibodo ny harinkarem-pireneny ilay indostria tsy misy fivoahan'ny fizahan-tany: tora-pasika, your rano madio kristaly, your lava-bato hitrandrahana, la fanjonoana, snorkeling, taranja golf ary mamakivaky ny lasa taloha.
Recommended Beach any Barbados
Raha te hanana hevitra amin'ity herinandro ity ny salan'isan'ny mari-pana any Barbados dia 28ºC. Fahafinaretana. Ny morontsiraka andrefana dia manolotra rano tony sy torapasika fasika fotsy. Amin'ny morontsiraka atsinanana na fananganana vatohara tototry ny ranon'ny Atlantika sy ny rivotra mahery ka misy onja maro eto fitetezana rivotra sy surf. Raha ny marina dia maro no mino fa izy ireo no morontsiraka tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao manao fampiharana ireo fanatanjahan-tena ireo.
Any amin'ny morontsiraka atsimo dia milamina tanteraka ny rano satria ny haran-dranomasina dia miaro ny morontsiraka ka eto dia afaka milomano sy milomano ianao. Ary farany, amin'ny morontsiraka atsimo atsinanana dia misy hetsika maro ihany koa amin'ny fanatanjahantena anaty rano, morontsiraka fasika mavokely ary hantsana. Barbados dia manana morontsiraka 60 amin'ny fitambarany ary salan'isa masoandro amin'ny 3000 ora. Ny roa amin'ireo moron-dranomasina ireo dia heverina ao amin'ny Top 10 amin'ireo morontsiraka tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao: St. Parish sy Crane Beach.
Any amin'ny morontsiraka andrefana dia ny torapasika voalaza Enina, Mullins, Gibbes ary Reeds Bay enina. Ny morontsiraka fasika fotsy dia an'ny Bay bay. Ny iray hafa tena tsara tarehy dia ny Heron bay ary ao amin'ny Morontsiraka Brighton misy ny fatana masoandro sy elo ary bara.
Amin'ny morontsiraka atsimo atsinanana sy atsinanana araka ny nolazainay fa misy rivotra, ka eto dia atolotray ny Crane Beach. Raha manam-bola hijanonana ao amin'ny Crane Resort ianao dia mendrika izany satria tsara sy ambany ny fijery ary miakatra amin'ny morontsiraka amin'ny ascenseur ianao. Helodrano ambany Izy io dia ny karatra paositra Karaiba mahazatra: hazo palmie, lava-bato ary hantsam-bato, misy fasika fotsy sy rano turkise daholo.
Amin'ny morontsiraka atsimo kosa dia Helodrano Carlisle, miendrika crescent avy any Bridgetown mankany amin'ny Hotely Hilton. Manomboka amin'ny seranan-tsambo ka hatrany amoron-tsiraka dia tsy mihoatra ny iray kilometatra kely akory.
Raha te handany andro any ivelan'ny trano ianao Accra Beach Mahafinaritra satria manana fivarotana lehibe eo akaiky eo sy mpamonjy voina izy io ka manao fitsangantsanganana ianao ary mijanona araka izay tianao.
Hetsika fizahan-tany hafa any Barbados
Barbados manana taloha lasa mpanjanaka ka ao anatin'ny tolotra fizahan-tany io. Rehefa reraky ny moron-dranomasina ianao, mandeha eny an-dalambe. Tonga ny Anglisy tamin'ny 1624 ka ny kolontsaina eto dia vilany fandringanana ny kolontsaina anglisy miaraka amin'ny kolotsaina Afrika Avaratra.
Miantso ny tenany ny mponin'i Barbados Midina izy ireo. Sariaka sy sosialy be ny vahoaka Bajan. Raha miteny anglisy ianao dia afaka manomboka miresaka amin'izy ireo momba ny lafiny rehetra amin'ny nosy. Mainty ny ankamaroany ary vitsy dia vitsy ny fotsy ary atsinanana. Ny teny anglisy no fiteny ofisialy saingy mazava ho azy fa tsy mitovy ny dikanteny eto an-toerana satria misy fiantraikany amin'ny tenim-paritra mahazatra any Karaiba.
Ny tanàna taloha manan-tantara sy ny Bridgetown Military Garrison dia raisina ho lova izao tontolo izao nanomboka tamin'ny 2011. Bridgetown dia manana tantara momba ny varotra efa ho efa-jato teo amin'ny resaka siramamy sy andevo ka nandalo teto ny olona eran'izao tontolo izao ary hita izany amin'ny maritrano eropeana kokoa. Heveriny fa io no seranana voalohany nahavita zotra inter-Atlantika ary ny toerana nisy azy dia tsara avy amin'ny fomba fijery miaramila ho an'ny Empira Britanika.
Izany no antony fitsangatsanganana amin'ireo tranobe miaramila Fitsangatsanganana an-tsitrapo indrindra, eo anelanelan'ny fonja sy ny toby. Eo izy ireo, eo amin'ireo ivon-toeram-pivarotana maoderina, arabe miloko, tsena, marina anaty tsara tarehy, kianja sy lalambe. Betsaka ihany koa ireo trano fisakafoanana ka afaka manararaotra ianao andramo ny ram eo an-toerana. Ny fisotroana piraty quintessential! Ary ny rum dia mifamatotra akaiky amin'ny siramamy ary toy izany koa ny fisotroana any Karaiba.
Betsaka ny milaza izany Barbados no toerana nahaterahan'ny rum. Ny fambolena siramamy dia mamokatra vokatra azo avy amin'ny molotra, izay, rehefa alaina amin'ny alikaola sy afangaro, dia mamokatra tsiro matsiro be. Tsy manam-paharoa ny rum satria namboarina tamin'ny ranon'ny fary, syrup sy molotra, noho izany dia misy karazany maro. Heveriny fa ny fary dia nambolena teto nanomboka tamin'ny 1640 ary tamin'ny taonjato faha-10 dia nisy tanimboly XNUMX lehibe namokatra tànana andevo.
Mbola anio azo atao ny mitsidika ny sasany amin'ireny orinasa ireny sy ny fikosoham-biny izay namokatra ny siramamy izay nalefa taty Eropa mba hodiovina. Toa ny toetr'andro Barbados no mahatonga ny siramamy eto manana kalitao faran'izay tsara, ka na ny siramamy na ny ron-kena dia tena manokana. Raha tianao ity tantara ity dia afaka misoratra anarana amin'ny iray amin'ireo fitsangatsanganana Rum misy: misy distilleriers misokatra maro toa ny Mount Gay Rum, ilay Factory Rum Foursquare & Heriateg Park, ny St. Nicholas Abbey Distellery na ny West Indies Rum Destillery.
Ary farany, anisan'ireo hetsika mahaliana azonao atao eto ny fitsidihana ny Brisitih Airways Concorde, notazonina tao amin'ny trano heva lehibe, milomano eo amin'ireo sokatra na ny mitaingina ny sambo mpisitrika Atlantis Azo atao mandritra ny taona izy io ary mamela anao hahita sambo sambo miafina any amin'ny halalin'ny Atlantika. Maharitra 40 minitra ny dia ary mahafinaritra be fotsiny.
Ny sidina anelanelan'i Espana sy Barbados dia maharitra adiny valo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » America » Barbados » Fialan-tsasatry ny masoandro any Barbados